Sida Loo Diyaariyo Mashiinkaaga Xilliga Jiilaalka - Nidaamka Baradhada
Dhamaadka xilliga waraabka, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo hanaan looga saarayo ciidda iyo qashinka dhuumaha. Isku soo aruurinta bacaadka xad dhaafka ah waxay kordhin kartaa culeyska mashiinka waxayna sababi kartaa waxyeelo dhanka dhismaha ah.
Si aad u daadiso gaariga, raac talaabooyinkan:
1. Bakhtii go'iyaha guud. Nidaamkani wuxuu u baahan yahay oo keliya biyo; nidaamka waraabka waa la joojin karaa inta lagu jiro biyo dhaqidda.
2. Tuubbada dheecaanka ka qaad munaarad kasta. Ka qaad ciid iyo wasakh tuubooyinkan.
Fiiro gaar ah: Markaad dib u rakibayso tuubooyinka bullaacadaha, rog shaabadooda cinjirka ah Tani waxay dheereyn doontaa nolosha shaabadaha.
3. Ka saar dabinka carada gaadhigii ugu dambeeyay ee jiidista.
4. Furayaasha ka saar bambada cantilever-ka.
5. Ku bilow mashiinka / bamka oo mashiinka si fiican u daa.
6. Xidho biyaha oo beddel tuubooyinka bullaacadda, dabinnada adag, iyo fiilooyinka mashiinka cantilever. Si looga hortago qabowga iyo waxyeelada tuubada ka dib marka la dhaqo mashiinka dhamaadka xilliga waraabinta, hubi in dhamaan dhuumaha bulaacadu gebi ahaanba gureen ka hor inta aan la bedelin tubooyinka iyo fiilooyinka
Ka soo saarista biyaha tubooyinka dhulka hoostiisa mara
Marxaladda muhiimka ah ee shaqadu waa biyo ka soo baxa dhammaan dhuumaha dhulka hoostiisa mara ee la dhigo nidaamka waraabka ee ka hooseeya xariijinta barafka. Sidoo kale waa lagama maarmaan in laga saaro fiilada suxulka hoose si gebi ahaanba looga nadiifiyo biyaha kiciyaha. Beddel dhammaan fiilooyinka ka dib soo saarista si looga hortago in jiirka ay soo galaan nidaamka.
Isku-darka waa in lagu subagaa dufan ka dib 5-10-kii kacdoon ee mashiinka.
Nadiifinta qalabka wax lagu xiro
Miiraha waa in la nadiifiyaa ugu yaraan hal mar sanadkii. Miirahaani wuxuu ka hortagaa inuu xirmo waalka 'solenoid valve' kaas oo kontaroola waalka xiran ee diyaaradda dhamaadka.
Soojiidista Hub Hub
Goobaha jiidaya ee gawaarida jiidaya waa in la saliido ugu yaraan hal mar sanadkii (doorbidayaa xilliga dayrta).
Hubinta cidhiidhiga lowska giraangirta
Dhammaan lowska giraangiraha waa in lagu adkeeyo illaa 125 lb-ft (170 N • m) sanadkii.
Birta ayaa balaarata marka heerkulku kaco isla markaana qandaraasyo markay dhacdo. Ilaa iyo inta nidaamka waraabku shaqeynayo, dhacdadan wax khatar ah ma keeneyso. Si kastaba ha noqotee, marka la dhigto gawaarida gawaarida ee la sameeyay sannad gudihiis, hoos u dhaca ay keento isku xoqidda birta waxay u horseedi kartaa waxyeelo dhisme.
Cadaadiska ay keeneen cadaadiska birta ayaa ku kordhaya dhererka mashiinka. Baabuurta dhererkoodu yahay 1500 oo fuudh (457 m) dherer ahaan ayay la kulmi doonaan walaacyadan, gaar ahaan marka isbedbedelka heer kulka (+ 90 ilaa 0 darajo Fahrenheit) iyo dhibaatooyin la xiriira baarkinka gawaarida la dhigto.
Markuu dhigto mashiinka xilliga fasaxa, hawlwadeenku wuxuu isticmaali karaa mid ka mid ah hababka soo socda:
1. Baabuurta dhig baaburka meesha lugta lagu buuxiyo.
2. Ku dabool laafka gawaarida looxaan alwaax ah (2 "X 12" [51 X 305 mm]). Baarkinkaaga dhig taayirradaadu ay salka ku hayaan sabuuradda.
3. Nidaamka rusheynta ee jiidan - Ku dhaji giraangiraha seddexaad kasta rooga jiida.
4. Talooyin ku saabsan nidaamka waraabka orodyaha - sii daa silsiladaha barroosinka oo, sidii kiiskii hore, dhig mashiinka aagga uu ku xirmay raadadka lugta.
5. Xir dhamaan jidadka oo dhaqaaji nidaamka waraabka 100-200 yaard (91-182 m) bishii. Ku shaqee nidaamka waraabka kaliya heerkulka ka sareeya 40 ° F (-4 ° C).
6. Gawaarida isku dhejiska ah oo ka badan 8-10 fuudh (2,5-3 m) waa in laga jaro. Faafinnada waa in lagu hubiyaa silsilado loogu talagalay isku-buufinta cimilada qabow.
Tilmaanta guud ee u diyaar garowga jiilaalka
Raac talooyinka soo-saaraha marka aad isu diyaarineyso xilliga qaboobaha dhammaan noocyada qalabka: bambooyin, sahay koronto, tuubooyin iyo tuubbooyin. Caadi ahaan tan waxaa ka mid ah: dufanka, nadiifinta tuubooyinka bullaacadaha, godad ka xirid si jiirka looga ilaaliyo, guud ahaan ilaalinta cimilada.
Nadiifinta tuubada kadib marka laga saaro dhamaan dhuumaha bulaacada waa inay ka nadiifisaa nidaamka waraabka ciida iyo qashinka daadsan. Beddel dhammaan dhuumaha qubashada oo hubi in biyuhu gebi ahaanba ka go'een khadka weyn. Qeyb kasta oo hooseysa oo ka mid ah dhuumaha waaweyn ee ka hooseeya xariijinta barafka iyo mashiinka waraabka waa in lagu dhejiyaa riski lagu rakibay meesha ugu hooseysa; tani waxay fursad u siin doontaa biyo ka soo tuurista tuubbada.
Iyada oo ku saleysan qalabka laga helo Warshadaha Valmont
Tags: makiinadaha saydhaaisu diyaarinta jiilaalka
In kabadan 40 kun tan oo baradho ah ayaa horey loo dhigay si loogu keydiyo gobolka Sakhalin
Kaqeybgalayaasha xafladda "From Vinta!" waxay ku soo bandhigeen horumarkooda bandhigii AGROSALON-2020
Goynta baradhada oo lagu dhameystiray Tatarstan